Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Ny hevitrao momba ny Fifidianana UNWTO ho avy
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • WTN
Firenena iray dia tsy maintsy miakatra amin'ny fivoriamben'ny UNWTO ho avy mba hangataka fifidianana miafina. Izao no antony:
Mpitarika mampiady hevitra indrindra ao amin'ny World Tourism Organization (UNWTO), Sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili dia mila ny roa ampahatelon'ny firenena mpikambana amin'ny Fihaonambe ho avy any Madrid mba hohamafisina mandritra ny fe-potoana 4 taona hafa.
Firenena 53 no mandà ny fe-potoam-piasana faharoa.
Ny firenena iray dia tokony hangataka latsa-bato fanamafisana miafina amin'ny Fihaonambe ho avy mba hahatonga ity dingana ity ho marina kokoa.
Tokony hohamafisina ve i Zurab Pololikashvili? kitiho eto
Ny fandavana no nataon’ny Sekretera jeneraly roa teo aloha Francesco Frangialli sy Taleb Rifai anisan'izany araka ny loharanom-baovaon'ny eTN ihany koa ny firenena mpampiantrano Espaina, ary firenena maro hafa antenaina.
Ankoatr'izay, misy ny ahiahy anatiny momba ny fivilian'ny etika amin'ny fikambanana, araka ny nambaran'ny UNWTO Ethics Officer tamin'ny tatitra nataony tamin'ny fivoriambe. Mitombo ihany koa ny ahiahy momba ny fomba tsy mangarahara ataon'ny Sekretera jeneraly amin'izao fotoana izao amin'ny fitantanana ny Human Resources sy ny didy fampiharana ny asa.
Manana firenena 159 ny UNWTO amin'izao fotoana izao. Araka ny andininy faha-22 ao amin’ny sata mifehy ny fikambanana, “ny sekretera jeneraly dia hotendren’ny a roa ampahatelon'ny mpikambana feno no manatrika sy mifidy ao amin’ny Fihaonambe”.
Midika izany fa izay firenena nanosika ny tsy fankatoavana ny sekretera jeneraly amin'izao fotoana izao, dia mila vato ratsy 53 ho an'i Pololikashvili mba hanakanana ny fifidianana indray raha toa ka tonga avokoa ireo firenena mpikambana.
Tsy mbola nisy ny fandavana teo amin’ny tantaran’ny UNWTO, fa araka ny loharanom-baovao iray nodinihin’ny eTurboNews izay mahafantatra tsara ny fomba fiasan’ny fandaminana, “tena miavaka ny zava-misy ankehitriny”.
Zurab Pololikashvili dia nofidian'ny komity mpanatanteraka vao haingana tamin'ny Janoary 2021 ho an'ny vanim-potoana 2022-2025. Nivondrona io komity io tamin’ny volana janoary, na dia tokony ho tamin’ny volana mey aza ny fotoana mahazatra
Tatitra be dia be tao amin'ny gazety frantsay Espaces , mitondra lohateny
“Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany, mahasoa na inona na inona ve izany?”
ary navoaka tamin'ny volana septambra lasa teo, nanamafy ny toe-javatra nisy ny fifidianana indray an'i Pololikashvili nataon'ny Filankevitra Mpanatanteraka tamin'ny Janoary 2021 voalohany navoakan'ny eTurboNews.
Ny fitsipiky ny UNWTO dia milaza fa ny fifidianana ny sekretera jeneraly dia tsy maintsy atao ao amin'ny foiben'ny UNWTO any Madrid foana. Araka ity tatitra ity dia nanapa-kevitra ny filankevitra fa handroso amin’ny volana janoary ny fifidianana ny sekretera jeneraly, mba hifanandrify amin’ny varotra FITUR. Tapaka izany tamin'ny fivorian'ny filankevitra mpanatanteraka tany Georgia, firenena niavian'ny Sekretera jeneraly. Nanaitra ny maro ny fivorian'ny filankevitra mpanatanteraka tany Georgia.
Tsy tamin’ny volana janoary anefa no nitrangan’ny FITUR, fa tamin’ny volana mey, ka tsy nisy dikany ny adihevitra nataon’ny SG mba hamindra ny fifidianana azy amin’ny volana janoary. Na izany aza, ny fivoriana tamin'ny volana Janoary nandritra ny vanim-potoana fanakatonana ny COVID-19 dia tombony mazava ho azy, ka tsy nety nanitsy ny daty izy.
Nolaviny mihitsy aza ny hanitsy ny daty taorian’ireo mpitarika ny UNWTO teo aloha Francesco Frangialli sy Taleb Rifai nandefa taratasy misokatra tamin'ny alàlan'ny rafitra fiarovana ny vao naorina Tambajotra fizahan-tany manerantany.
Nampahatsiahy izany ny tohan-kevitr’ireo sekretera jeneraly roa teo aloha io fifidianana io dia natao tamin'ny lohataona foana, mba hamelana ny Sekretaria sy ny Filankevitra Mpanatanteraka hankatò ny tetibola ho an’ny taona manaraka, miaraka amin’ny fanantenana fa hatao amin’ny fararano ny fivoriambe.
Nanamafy i Frangialli sy Rifai fa mila fihaonana mivantana ny fifidianana fa tsy virtoaly.
Ny didy aman-dalàna mifehy ny zotram-pifidianana dia midika hoe maha zava-dehibe ny foto-kevitry ny latsa-bato miafina, zavatra tena sarotra ny handaminana amina fivoriana virtoaly.”
Nasongadin'izy ireo fa tsy handeha any Madrid ny minisitra, indrindra mandritra ny areti-mifindra. Miantehitra amin'ny masoivohony ny firenena fa tsy amin'ny minisitry ny fizahantany hisolo tena ny fireneny amin'ny fifidianana. Indrisy anefa fa izany no nandrasan'i Zurab ary tena nitranga tokoa. Tena tsy rariny izany ho an'ireo firenena mpikambana tsy manana masoivoho any Madrid. Izany fotsiny, ary ny fotoana fohy hivoahan'ireo kandidà vaovao dia nanimba ny fahamarinan'ny fifidianana.
Nanomboka ny ady teo amin'i Zurab Pololikashvili, kandidà ho amin'ny fifidianana indray, sy Shaika Mai bint Mohamed al Khalifa, mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka ao Bahrain ary Minisitry ny Kolontsaina ao amin'io firenena io teo anelanelan'ny taona 2010 sy 2014, izay hany tokana amin'ireo kandidà 6. afaka manolotra ny taratasy fanendrena azy ara-potoana sy araka ny tokony ho izy.
Ny loharanom-baovao akaiky ny UNWTO dia nanondro hatrany ny “tsy fanarahan-dalàna lehibe” tamin'ny fifidianana ny sekretera jeneraly ankehitriny.
eTurboNews nitatitra ny momba ilay mpisolovava nandrafitra ny lalàna mifehy ny UNWTO. Noheveriny fa tokony ho nambara ho tsy manankery ny fifidianana sekretera jeneraly amin’ny taona 2017.
Fanendrena Tale Mpanatanteraka
Misy ny ahiahy anatiny momba ny fivilian'ny etika UNWTO hatramin'ny nilazan'ny tompon'andraikitry ny etika ao amin'ny fikambanana, Marina Diotallevi, tao amin'ny tatitry ny Human Resource izay mitondra any amin'ny fivoriambe any Madrid. Miresaka momba ny “fitomboan'ny ahiahy sy ny alahelo izy fa tapaka tampoka ny fomba fanao anatiny mangarahara izay nisy tamin'ny fitantanan'ny UNWTO teo aloha, ankoatry ny zavatra hafa, amin'ny resaka fisondrotana, fanasokajiana ny toerana sy fanendrena, ka namela toerana malalaka ho an'ny tsy fahampiana sy ny fitantanana tsy ara-drariny ”.
Raha ny marina, tamin'ity herinandro ity, ny Spanish Magazine HOSTELTUR dia nahafantatra fa ny sekretera jeneraly dia nanendry an'i Zoritsa Urosevic ho tale mpanatanteraka ao amin'ny UNWTO. Io toerana io raha ny marina no mahatonga azy ho laharana fahatelo, taorian'ny sekretera jeneraly sy ny tale mpanatanteraka hafa, ilay Shinoa Zhu Shanzhong. Manomboka ny 19 oktobra izao ny fanendrena.
Ny Filankevitra Mpanatanteraka farany dia natao tamin'ny Janoary tamin'ity taona ity tany Madrid, ary tsy nisy ny fandaharam-potoana momba io fanendrena io.
Ny tale mpanatanteraka, toerana izay politika hatramin'izao, dia ilay manara-maso ny sampana etika, kolontsaina ary andraikitra ara-tsosialy ankehitriny; Fanavaozana, fanabeazana ary fampiasam-bola; Statistics; Fampandrosoana maharitra sy faharanitan-tsaina ary fifaninanana amin'ny tsenan'ny fizahantany.
HOSTELTUR fantatra ihany koa fa 200,000 Euros izay nankatoavina "asa hanatsarana ny fotodrafitrasa ao amin'ny foibe", dia nolaniana manokana ho fanatsarana ny biraon'ny sekretera jeneraly. Ity asa ity dia natao tsy nisy tolo-bidy ho an'ny daholobe araka ny fepetra takian'ny UNWTO.
Ankoatra izay, araka ny loharanom-baovao hatrany, dia manohy ny asa an-telefaonina ny mpiasan’ny sekretera jeneraly ary hanao izany farafaharatsiny hatramin’ny faran’ny taona, araka ny efa nomanina.
eTurboNews manontany ny mpamaky izao:
Tokony hohamafisina ho sekretera jeneralin'ny UNWTO ve i Zurab Pololikashvili?